La wadaag Iimaanka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Dhowr maalmood kahor anigoo shaqada guriga joogaya, waxaan ku arkay xayeysiis waddada lagu xayeysiinayo tifaftirka hadda joornaal. Qoraalka dhejiska ah ayaa la akhriyay waxyaabaha soo socda: "Mandela waa Ciise". Hadalkaan marki ugu horaysay ayaa naxay. Sidee qof u odhan karaa wax sidaas oo kale ah! Mandela waa shaqsi gaar ah, laakiin miyaad barbar dhigi kartaa Ciise ama ma isaga saari kartaan isla heerkaas? Si kastaba ha noqotee, qoraalkan ayaa igu dhajiyay fikirka. Marka laga soo tago Mandela, dad badan oo gaar ah ayaa ku noolaa dhulkaan. 100-kii sano ee la soo dhaafay oo keliya waxaa jiray dad sida Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr iyo sidoo kale Nelson Mandela kuwaas oo, sida Ciise oo kale ah, ay soo mareen caddaalad-darrooyinka waxayna ka gudbeen caqabado aan loo dulqaadan karin oo xitaa helay aqoonsi caalami ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay ku dhibtoodeen hab iyaga u gaar ah. Waa la garaacay, la xiray, loo hanjabay, la cabsi geliyey, oo xataa la dilay. Xaaladaha Gaandi iyo Martin Luther King Jr, labaduba waxay ku bixiyeen naftooda. Marka muxuu Ciise ka dhigayaa mid gaar ah? Waa maxay sababta in kabadan laba bilyan oo masiixiyiin ah caabudaan isaga?
Ciise dembi ma lahayn
Gaandi, Martin Luther King Jr., iyo Nelson Mandela midkoodna weligood ma sheegan inay yihiin dembi la'aan. Laakiin Axdiga Cusubi dad badani waxay ka marag furayaan in Ciise u baahan yahay xiriir dhow oo uu inala yeesho; ma jiro qof kale oo bini’aadanka kari kara oo sameeya aayadda xaqiiqda ah in Ciise aanu dambi lahayn. 1 Butros 2,22:4,15 waxaan ka akhrisan karnaa waxyaabaha soo socda: "Kii aan dembaabin oo afkiisu khiyaanona lahayn afkiisa" iyo Cibraaniyada "Waayo, ma lihin wadaad sare oo aan itaal darrkeenna u adkaysan karin. , laakiin yaa lagu tijaabiyey wax walba oo inaga mid ah, laakiin dembi la'aan. Ciise wuu fiicnaa oo, si ka duwan Mandela iyo kuwa kaleba, weligood ma dembaabin.
Ciise wuxuu sheegtey inuu yahay Ilaah
Gaandi, Martin Luther King Jr, ama Nelson Mandela midkoodna weligiis ma sheegan inuu Ilaah yahay, laakiin Ciise sidaas ayuu yeelay sidaas. Yooxanaa 10,30, "Aniga iyo Aabbuhu mid baannu nahay." Caddayntu waa mid aad u geesinimo leh haddana ciise. Sababtaas awgeed ayaa Yuhuuddu waxay doonayeen inay iskutallaabta ku qodbaan.
Waxaa jiray dad kale oo taariikhda galay, sida Augustus Kaysar iyo Boqor Nebukadnesar, kuwaasoo sheegtay inay ilaahnimo yihiin. Laakiin xukunkooda laguma xusin nabad, jacayl iyo wanaagsanaanta dadka, laakiin waxaa lagu gartaa dulmiga, xumaan iyo damaca awoodda. Si ka duwan taa waa tan soo socota ee Ciise, oo aan dooneynin inuu isaga ka dhigo mid caan ah, taajir ah oo xoog leh, laakiin kaliya inuu u keeno jacaylka Ilaah iyo warka wanaagsan ee badbaadada xagga Ciise Masiix dadka.
Xaqiijiyay mucjisooyinka iyo waxsii sheegyada
Falimaha Rasuullada 2,22: 23-5000, rasuulku wuxuu qoray soo socota ee ku saabsan Bentakostiga: "Rag yahow reer binu Israa'iilow, maqla erayadan: Ciisihii reer Naasared, kii Ilaah idinka dhex muujiyey camal iyo calaamooyin iyo calaamooyin uu Ilaah ku sameeyey isaga dhexdiinna dhexdeeda Sidaad naftaada u og tahay, waad garaacday oo dishay ninkaas Ilaah la siiyey talo uu ku siiyo talo iyo caawimaad xagga quruumaha. Halkan Butros wuxuu kula hadlayaa dadka Ciise yaqaan. Waxay arkeen mucjisooyinka uu sameeyay, qaarkoodna malaha xataa halkaas ayuu taagay markii Laasaros la sara kiciyey, oo nin (Haweenka iyo carruurta aan lagu darin) ayaa la siiyaa cunto, jinniyo xunxun bay bogsiiyeen oo waxay bogsiiyeen kuwa buka iyo kuwa curyaanka ah. Dad badan ayaa ka markhaati kacay sarakiciddiisa wayna arkeen. Isagu nin uun ma ahayn. Kaliya ma uusan hadlin, laakiin wuxuu ku shaqeeyay hadalkiisa. In kasta oo ay maanta tahay tikniyoolajiyadda casriga ah, qofna ma fahmi karo mucjisooyinka Ciise sameeyey. Ma jiro qof maanta biyo u rogi kara khamri, Oo dadka ka sara kicin kara, oo cuntada u kordhin kara. In kasta oo waxyaalahan oo dhami ay yihiin kuwa aad u yaab badan, haddana xaqiiqda ah inaan aad uga helo mucjisooyinka mucjisada ah ee Ciise sameeyey waa sababta oo ah in ka badan 700 oo waxsii sheegyada ay tahay in uu rumoobo Masiixa isla markaana Ciise midkasta uu fuliyay. Waxsii sheegyadaasi waxaa la sameeyay in kabadan kun sano kahor dhalashadiisa. Si runtii loo fahmo sida ay gaarka u tahay tan iyo markii Ciise fuliyay waxsii sheegyadaan, qofku waa inuu eegaa suuragalnimada tirakoobka inuu qof fulinayo dhammaan waxsii sheegyadaas. Haddii aan eegnay suurtagalnimada qof kasta oo fulinaya waxsii sheegyadii 300 ee ugu muhiimsanaa ee ku saabsan Ciise, itimaalku wuxuu noqon karaa 1; (Hal mid leh 157 ዜro). Fursadaha, maadaama Ciise oo keliya u dhacey dhammaystirka waxsii sheegyada, waa kuwa aad u yar oo ay umuuqdaan wax aan macquul aheyn. Sharaxa kaliya ee sida Ciise u awoodo inuu fuliyo waxsii sheegyadaas oo dhan waa maxaa yeelay isagu waa Ilaah laftiisa oo hagay dhacdooyinka.
Ciise wuxuu ubaahan yahay xiriir dhow oo inaga dhexeeya aadanuhu
sida Gandhi, Martin Luther King Jr, iyo Mandela waxay lahaayeen dad badan oo raacsan, laakiin uma suurtoobin qof caadi ah inuu xidhiidh la yeesho. Ciise, dhanka kale, wuxuu nagu casuumay inaan xiriir gaar ah la lahaano isaga. Yooxanaa 17,20: 23 wuxuu ku tukanayaa ereyada soo socda: «Kaliya adiga kuu baryi maayo, laakiin sidoo kale kuwa kuwa aniga igu rumaystaa eraygaaga si ay dhammaantood isku mid yihiin. Sida aabbe oo kale adigaa igu jira, anna aan adiga kugu dhex jiraa, sidaas oo ay tahay inay nagu jiraan, in dunidu rumeysan tahay inaad adigu i soo dirtay. Oo waxaan iyaga ku ammaanay ammaantaad i siisay inay mid ahaadaan, sidaan nahay, anna annagaa dhex joognay, annaguna anigaad igu jirtaa, inay mid ahaadaan isla markaana dunida yaqaan, maxaa yeelay adigu waad i soo dirtay oo aad jeclaatay. sida aad ii jeceshahay. »
Mandela ma yaqaan, maadaama aan jiro, isaguna ma garan karo. Ka dib oo dhan, isagu waa bini-aadam. Laakiin midkeen kasta wuxuu helaa xiriir uu la yeesho ciise. Waxaad kula wadaagi kartaa waxyaabaha aad jeceshahay, farxadda, cabsida iyo welwelka aad ka qabto isaga. Iyagu culays kuma aha isaga isaga mana daali doono ama aad buu ugu mashquulsanaan doonaa inuu dhageysto. Ciise wuu ka badan yahay qof kasta oo muhiim ah oo weligiis noolaa maxaa yeelay isagu ma ahayn aadanaha oo keliya, laakiin sidoo kale Ilaah.
In kasta oo ay umuuqatay in la isbarbar dhigayo Mandela iyo Ciise bilowga maqaalka, hadana waxaan ognahay in aysan macquul aheyn. Waxaan isbarbar dhigi karnaa Mandela iyo Gaandi iyo Martin Luther King Jr, laakiin ma ahan Ciise, maxaa yeelay waxaan isbarbar dhigaa dhibic biyo ah oo badda dhexdeeda ah. Qofna isma barbardhigi kartid Ciise maxaa yeelay qof isaga la mid ah ma jiro. Sababtoo ah qofna ma ahan sida uu isagu u yahay.
Waxaa qoray Shaun de Greekff